DHAGEYSO Taliska Milatariga Soomaaliya oo sheegay inay burburiyeen doomo ay shabaabku lahaayee. – The Voice of Northeastern Kenya
DHAGEYSO Taliska Milatariga Soomaaliya oo sheegay inay burburiyeen doomo ay shabaabku lahaayee.
Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Daahir Aadan Cilmi (Indha qarshe) ayaa sheegay in hawlgal ay ka fuliyeen degaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe iay ku burburiyeen dooman ay isticmaalayeen Ururka Al Shabaab.
General Indha qarshe ayaa wuxuu sidoo kale sheegay in hawlgaladaas keliya aysan ku ekaan doonin gobolka Shabeellaha Dhexe, sidoo kalena xoogooda uu ka socdo gobolada Shabeellaha Hoose iyo Hiiraan,ciidamada Milatariga Soomaaliyana ay wadaan qorsheyaal kale oo ay ku doonayaan inay kula wareegaaan deegaano kale oo hada ay AL-shabaab gacanta ku hayaan.
Ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa laba jibaaray hawlgalada ka dhanka ah Ururka Al Shabaab ee ay ka wadaan deegaanada ay maamulaan, waxayna dhawaan ku guuleysteen inay isku furaan wadooyin ay horay u go’doomiyeen Shabaab, waxayna sidoo kale la wareegeen deegaano dhowr ah oo ay horay u maamulayeen xoogaga dowlada diidan.
← DHAGEYSO Amaanka magaalada Garowe oo waxka badal lagu sameeyey.
DHAGEYSO Maamulka Puntland oo sheegay inay soo bateen dadka soo galootiga ah. →